VirtualBox 6.0 yakaburitswa zviri pamutemo | Linux Vakapindwa muropa
Oracle yapedza kuvandudzwa kweshanduro nyowani yeVirtualBox, saka unogona ikozvino kurodha pasi VirtualBox 6.0 kuyedza ayo matsva maficha uye zvinowedzerwa. Icho chizvarwa chitsva cheiyi nhevedzano yemuchinjikwa-chikuva yakavhurwa sosi virtualization software, inowanikwa kune ese maLinux-mhando hots, pamwe neMacOS neWindows, zvachose mahara. Pane kudaro, zvinokutendera kuti uwedzere mamwe masisitimu anoshanda sevashanyi.
Uku kuburitswa kutsva kana kugadzirisa ndeye kuvandudza kukuru uchienzaniswa neshanduro yapfuura 5.x. Pakati pechinonyanya kushandurwa chatinoona muVirtualBox 6.0 isu tine rutsigiro rwekunze michina chaiyo kubva kuOracle Cloud zvivakwa, saka inyaya huru kune avo vese vane sevhisi iri mugore, uye vava kugona kuisa yavo yavo MVs kubva kunharaunda . Zvakare, kune akati wandei akagadziriswa mabugs aive aripo mune dzakapfuura shanduro.
Sezvo kana izvo zvisina kukwana, kune zvakare rutsigiro rweSurround, ndiko kuti, kune ruzha system yevashandisi veiyo nyowani yekuvaka Windows 10, pamwe nerutsigiro rweHyper-V pane Windows inomiririra kupa zvirinani kuita, chimwe chinhu chisiri. Iyo inokanganisa kugoverwa kweLinux, asi izvo zvinonakidza kucherechedza. Chii chinokanganisa Linux, senge mamwe mapuratifomu, ndiko kudzokororwa kwakaitwa kuUI, iko zvino kuve kwakanyanya kunzwisisa, kuri nyore uye inoshamisa graphical kugadzirisa.
Chokwadi, VirtualBox yaitova chirongwa chakareruka, asi shanduko idzi dzinokosheswa, nekuti izvozvi pane maneja maneja wekutonga nekugadzira makopi kune vese muenzi neiye anotambira. Saizvozvo, zve Linux 4.20, kumwe kugadziridzwa kwakaitwa kuti riite nenzira iri nani. Semuenzaniso, isu ikozvino tine 3D mifananidzo inotsigirwa yeWindows vashanyi, 3D VMSVGA kutevedzera zvakare yeSolaris neLinux vashanyi, rutsigiro rwekutanga rwevashanyi veMacOS, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » VirtualBox 6.0 yakaburitswa zviri pamutemo
Mhoroi, ndoda kukubvunza mubvunzo semunhu asinganzwisise zvakanyanya nezve hunyanzvi nyaya, asi zvinoenderana nezvandaigona kuona padandemutande, mamwe maW program anoshandisa OpenGL (senge SketchUp zvakanangana) HAUNGATADZE kushanda, asi chinyorwa chinoverenga chirevo chinotevera: «… Semuenzaniso, isu ikozvino tine 3D mifananidzo inotsigirwa kune Windows vashanyi…».
Izvi zvinoreva here kubudirira mune iyo pfungwa? Ini ndakaisa Sketchup 2018 kakati wandei muVirtualBox mukati meUbuntu uye haina kushanda nekuda kwenyaya yeOpenGL.
Ndinokutendai zvikuru neruzivo rwakawanda uye nezvakawanda zvidzidzo zvatinogara tichiwana pano.
Ndinoda kuziva kuti dhigirii rake repuraimari rakabhadhara zvakadii mhuri yemunyori
10 akanakisa emuno mavhidhiyo emitambo yeLinux